Indawo yokuhlala eKleinmachnow - I-Airbnb
Indawo yokuhlala eKleinmachnow
Le ndlu ikwigumbi elingaphantsi kwendlu yosapho evaliweyo eKleinmachnow, kanye kumasango eBerlin.
Yiyunithi yokuhlala ezimeleyo (iflethi kamakhulu) ekunokufikelelwa kuyo ngendlela yokungena esecaleni (izinyuko zangaphandle)
Indawo emalunga ne-80 yeskwemitha, indlu enefenitshala ekumgangatho ophezulu ineholo ebanzi apho aphuma khona la magumbi alandelayo:
eneshawa, indlu yangasese, isitya sezandla kunye nomatshini wokuhlamba.
kunye nesofa (oku kunokuguqulwa kube yibhedi apho umntu omdala omnye okanye abantwana ababini banokulala ngokukhululekile), iyunithi yodonga lwe-Hifi kunye ne-TV (i-TV ye-satellite) kunye ne-VCR kunye ne-stereo, ipiyano kunye ne-wardrobe (apho yethu izinto, i-wardrobe kwigumbi lokulala isetyenziselwa kuphela umqeshi olungile).
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji, isikhenkcezisi (amagumbi ama-3), i-oveni, isitovu seceramic, i-extractor fan, i-dishwasher, umatshini wekofu (Nespresso) kunye ne-microwave.
Indawo yokutyela enezihlalo ukuya kuthi ga kwi-5 yabantu kunye netafile yokutyela.
Ngebhedi ephindwe kabini kunye newodrophu etyibilikayo.
Kwiflethi iWi-Fi yasimahla iyafumaneka.
Ngolungiselelo sinokubonelela ngeebhayisekile kubantu abadala ababini
Ukufikelela kwindlu ngendlu yokungena eyahlukileyo, ekunokufikelelwa kuyo ngezitepsi zangaphandle.
Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka phambi kwendlu.
Uninzi lwethu sikwisiza kwaye siyakuvuyela ukunceda.
Inkonzo yebhasi ekufutshane (620, yi-622) inokufikelelwa kuhambo lwemizuzu emi-3.
Ukusuka apho ungafikelela kwi-S Bahnhof Berlin Zehlendorf ngemizuzu eyi-13. Ezinye izikhululo zasezidolophini kulo mmandla yiMexikoplatz, iWannsee neTeltow; Indlela engaphantsi elandelayo yiKrumme Lanke.
Ikhaya lethu libandakanya abantwana aba-2 kunye neGolden Retriever (oku akuvumelekanga kwigumbi lokuhlala)
Sihlala kwisitrato esincinci esisecaleni kufutshane nombindi weKleinmachnow, apho uya kufumana yonke into kwiimfuno zakho zemihla ngemihla (indawo yokubhaka, ivenkile enkulu, ivenkile ethengisa izinto eziphilayo, ivenkile yamachiza, ikhemesti, isicoci esomileyo, isilungisi seenwele, ugqirha wamehlo njl.njl).
Ukongeza, iivenkile zokutyela kunye neKleinmachnower Kammerspiele, apho umculo - iithiyetha kunye nemiboniso bhanyabhanya zinikezelwa azikho kude.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kleinmachnow